अन्तर्राष्ट्रिय – yuwa Awaj
काठमाण्डाै – खोप लगाएको दुई दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई को'रोना भा'इरसको सङ्क्र'मण पुष्टि भएको छ । को'रोना पुष्टि भएपछि उहाँ आइसाेलेशनमा बस्नुभएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ फैसल सुल्तानले बताउनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री खानमा हल्का खोकी र ज्वरोसहितको मध्यम लक्षण देखिएको पनि सुल्तानले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले बिहीवार मात्रै को'रोना विरु'द्धको खोपको पहिलो डोज लगाउनुभएको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान पछिल्ला दिनमा मास्क नलगाइकनै विभिन्न भेला, बैठक र आमसभामा सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो । पाकिस्तानमा पछिल्लो महिनायता सङ्क्र'मितको संख्या बढ्दै गएपछि केहि सहरमा आं'शिक लकडाउन लगाइएको छ । स'ङ्क्रमितको बढ्दो संख्याले चिन्तित बनाएको र जो'खिमपूर्ण तेस्रो लहरको खत'रा रहेको प्रधानमन्त्री खानको भनाइ छ । पाकिस्तान
Jan62021 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडाैं : पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पि'यनशिप (पीएमजीसी) २०२० को फाइनलमा नेपाली टिम ‘एब'रप्ट स्ले'यर’ प्रवेश गरेको छ । पीएमजीसीमा अब नेपाली टिमले उपाधिका लागि प्रति'स्पर्धा गर्नेछ । पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्या'म्पियनशिप २०२० को फाइनल आगामी जनवरी २१ देखि २४ सम्म सञ्चालन हुनेछ । सुपर वि'केण्ड रा'उण्डमा स्लेयरले १० औं स्थान ओगट्दै ग्लोबल च्याम्पि|यनशिपको फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । यसअघि ‘पब्जी मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया’ को विजेता बनेको एबरप्ट स्लेयर र फस्ट रन'रअप भएको ‘द रियल सोल्डर’ (डीआरएस) ग्लोबल च्याम्पिय'नशिपका लागि छनौट भएका थिए । पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पि|यनशिप २०२० मा नेपाली टिम एबर|प्ट स्लेयर फाइनलमा प्रवेश गरेपनि डीआरएस भने सुपर विके'ण्ड चर'णबाटै बाहिरिएको थियो । फाइनलमा प्रवेश गरेको एबरप्ट स्लेयरले चार विके'ण्डको अवधिमा कूल ४५ खेलमा ३ सय १२ अंक बटुलेको थियो
Dec172020 by Yuwa AawajNo Comments
अमिताभ बच्चनलाई समेत पछि पार्दै नेहा बनिन् विश्वकै प्रभा’वशाली सेलि’ब्रेटीको शीर्ष स्थानमा…हेर्नुहोस् ।
दिल्ली : चर्चीत भारतीय गायि:का नेहा क'क्कड फो'र्ब्सको प्रभा'वशाली सेलि'ब्रेटी सू'चीको शीर्ष स्थानमा परेकी छिन । नेहा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा प्रभाव'शाली सेलि’ब्रेटीको सूची’को पहिलो स्थानमा परेकी हुन् । यो खवर उनले सामाजिक संजाल मार्फत सेयर गरेकि हुन । फो'र्ब्सको अहि’लेको यस सूची’मा भारतका १२ जना सेलिब्रे’टी परेका छन् । सूचीमा परेका अमिताभ बच्चन जस्ता च'र्चित ह'स्तीलाई समेत पछि पार्दै नेहा क'क्कड पहिलो स्थान’मा पुगेकी हुन् । उनले भनेकी छिन्, ‘स्व'यंप्रति निकै गर्वान्वि’त छु । तपाईंहरुलाई थाहा छ, यो सूचीमा अमिता’भ बच्चन सर र शाह’रुख सर गरी मात्रै १२ भारतीय परेका छन्, जसको हिस्सा म पनि भएको छु। धन्यवाद भगवान् ! तपाईंहरु सबैला’ई पनि धन्यवाद।’ हेर्नुहोस् उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै !
बधाई ! कोदोको खीर बनाएर बीबीसी मा’स्टर सेफको टप ४ मा पुग्न सफल नेपाली सेफ सन्तोष…हेर्नुहोस् ।
लण्डन : बीबीसीबाट प्रसारित ‘मास्टर सेफ यूके २०२०’ को दो'श्रो चर'णको प्रतिस्प'र्धामा आफ्ना प्रति'स्पर्धीलाई पछि पार्दै सन्तोष शाह टप ४ मा पुग्न सफल भएका छन् । मंगल बार राति फाइनल चर|णको पहिलो समूहबाट उनी शीर्ष चारमा पुगेका हुन् । नेपाली सेफ साह मंगलबार राति ‘बीबीसी वान’ टेलिभिजनबाट प्र'शारण भएको कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिस्प'र्धीलाई पछि पार्दै शी'र्ष चा'रमा पुगेका हुन् । अ'न्तिम चारमा पुग्नका लागि उनले डि'जर्टको रुपमा कोदोको खि'र बनाएर नि'र्णयक सामु पस्किएका थिए। सँगै उनले यो प्रति'स्पर्धाबाट छनोट हुनका लागि आँपको कु'ल्फी र अ'मौरा बनाए । यो प्रतिस्प'र्धाको हरेक चर'णमा नेपाली खाना पस्किँदै आएका उनी यही प्रति स्प'र्धामा सहभागी भएपछि नेपाल भित्र समेत च'र्चित बनेका छन् । लण्डनको प्र'ख्यात सेफहरु सग प्रशिक्ष'णसँगै काम गरिसकेका सन्तोष मास्टर से'फ प्रोफे'शनल यूके मार्फत नेपालका वि
Dec122020 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौँ : मलेसियामा अबै'धानिकरुपमा बसेका आप्रवासी कामदारहरुका लागि सरकारले दुईवटा विकल्प दिएको छ रिक्या'लिब्रेसन कार्यक्रम अन्तर्गत मलेसिया सरकारले न्यून शुल्क जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किने वा निश्चित प्र'कृया पुरा गरेर मलेशियामै रोजगारी गर्ने विकल्प अघि सारेको हो । सरकारले विदेशी श्रमिकलाई मलेशिया बसाईलाई वैधानिक बनाएर बस्न पाउने वा सहुलियत दरको जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अवैधानिक रुपमा बसेका र स्वदेश फर्कन चाहनेहरुले अध्यागमन कार्यालयमा ५ सय मलेसियन रिं'गिट तिरेर निश्चित प्रकृया पुरा गरी चेकआउट मेमो लिनु पर्ने छ । डिसेम्वर २१ देखि सुरु हुने उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेश फर्किन चाहनेहरुसँग राहदानी वा ट्राभल डकु'मेण्ट तथा नेपाल फर्किने टिकटको बुकिङ हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ | मलेसियाको अध्या'गमन कार्यालयबाट स्वदेश फिर्ताका लागि चेक आउट मेमो अनिवार्य लिन